Yeremia 8 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
8 “Saa bere no,” Yehowa asɛm ni, “nkurɔfo bɛsesaw Yuda ahene nnompe ne ne mpanyimfo nnompe ne asɔfo nnompe ne adiyifo nnompe ne Yerusalemfo nnompe afi wɔn adamoa mu.+ 2 Na wɔbɛtrɛtrɛw mu akyerɛ owia ne ɔsram ne ɔsoro asafo nyinaa a wɔdɔɔ wɔn na wɔsom wɔn, na wodii wɔn akyi,+ na wɔhwehwɛɛ wɔn akyi kwan, na wɔkotow wɔn no.+ Wɔremmoa ano, na wɔrensie. Ɛbɛyɛ sumina asase ani.”+ 3 “Abusua bɔne yi nkae a wɔbɛka no nyinaa bɛpɛ owu asen nkwa+ wɔn tenabea hɔ, faako a mɛbɔ wɔn ahwete no nyinaa,”+ asafo Yehowa asɛm ni. 4 “Ka kyerɛ wɔn sɛ, ‘Nea Yehowa aka ni: “Sɛ wɔhwe ase a, wɔrensɔre bio anaa?+ Sɛ obi san n’akyi a, ɔfoforo nso rensan n’akyi anaa?+ 5 Dɛn nti na Yerusalem man yi kura nkontompo mu de to mmara yi? Wokura nnaadaasɛm+ mu denneennen, na wɔmpɛ sɛ wɔsan wɔn akyi.+ 6 Meyɛɛ aso+ tiei,+ nanso wɔanka nea ɛteɛ. Obiara nni hɔ a ɔsakra fii ne bɔne ho kae sɛ,+ ‘Dɛn na mayɛ yi?’ Obiara asi kwan so reyɛ nea nkurɔfo yɛ no bi+ te sɛ ɔpɔnkɔ a ɔde mmirika rekɔ akono. 7 Wim asukɔnkɔn mpo nim ne bere,+ aburuburuw+ ne asomfena ne apatiprɛw nim bere a wɔba. Na me man de, wonnim Yehowa atemmusɛm.”’+ 8 “‘Dɛn nti na mutumi ka sɛ: “Yɛyɛ anyansafo, na Yehowa mmara wɔ yɛn nkyɛn”?+ Ampa ara, akyerɛwfo kyerɛwdua+ torofo no ayɛ adwuma nkontompo mu. 9 Anyansafo ani awu.+ Wɔabɔ hu, na wɔbɛkyere wɔn. Hwɛ! Yehowa asɛm na wɔapo yi, na nyansa bɛn na wɔwɔ?+ 10 Ɛno nti, mede wɔn yerenom bɛma mmarima foforo, na wɔn nsase ayɛ nnipa foforo dea,+ efisɛ efi akumaa so kosi ɔkɛse so, obiara pɛ mfaso bɔne;+ efi odiyifo so kosi ɔsɔfo so, wɔn nyinaa nni nokware.+ 11 Wɔsa me man babea akuru biara biara,+ na wɔka sɛ, “Asomdwoe wɔ hɔ! Asomdwoe wɔ hɔ!” bere a asomdwoe biara nni hɔ.+ 12 Wɔn ani wui sɛ wɔyɛɛ akyide anaa?+ Asɛm no ne sɛ, wɔn ani anwu koraa, na wonnim fɛre nso.+ “‘Ɛno nti, wɔbɛfra atɔfo mu atotɔ, na akontaabu da no,+ wobehintihintiw,’ Yehowa na waka.+ 13 “‘Sɛ wɔboaboa ano a, mɛma asã koraa,’ Yehowa asɛm ni.+ ‘Bobe aba remma bobe dua so,+ borɔdɔma aba remma borɔdɔma dua so, na ɛso nhaban beguan. Nea mede ama wɔn no betwa wɔn ho akɔ.’” 14 “Dɛn nti na yɛda so tete hɔ yi? Mommoaboa mo ano na yɛnkɔ nkurow a wɔabɔ ho ban+ no mu na yɛnkɔyɛ komm wɔ hɔ,+ na Yehowa yɛn Nyankopɔn na waka sɛ yɛnyɛ komm, na wama yɛn nsu a awuduru+ wom sɛ yɛnnom efisɛ yɛayɛ Yehowa bɔne. 15 Yɛhwɛɛ asomdwoe kwan, nanso adepa bi amma;+ yɛhwɛɛ ayaresa kwan, nanso hwɛ! ahude na ɛbae!+ 16 Wɔate n’apɔnkɔ home hahyeehahyee fi Dan.+ Wɔn apɔnkɔnini nteɛm nti, asase no nyinaa afi ase rewosow.+ Wɔaba rebedi asase no ne nea ɛwɔ so, nkurow no ne emu nnipa.” 17 “Na hwɛ, merema awɔ aba mo mu, nhurutoa+ a kaberɛkyerefo+ biara ntumi nkasa nkyerɛ wɔn, na wɔabɛkeka mo,” Yehowa asɛm ni. 18 Awerɛhow a enni aduru aba me so.+ Meyare me koma. 19 Hwɛ, wɔte me man babea sufrɛ wɔ akyirikyiri+ asase bi so sɛ: “Yehowa nni Sion anaa?+ Anaasɛ ne hene nni ne mu?”+ “Dɛn nti na wɔde wɔn ahoni a wɔasen ne ananafo anyamehuhuw no ahyɛ me abufuw?”+ 20 “Otwabere atwam, ahohuru bere aba n’awiei, nanso yɛn de, yennyaa ogye!”+ 21 Me man babea sɛe no nti,+ mabubu.+ Me werɛ ahow. Ahodwiriw kɛse akyekyere me.+ 22 Balsam ngo nni Gilead anaa?+ Na ɔyaresafo biara nni hɔ anaa?+ Ɛnde, dɛn nti na me man babea nnyaa+ ayaresa yi?+